musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Macau GT Cup inotsigirwa neSands China Title
Sands China Ltd. ndiye aive zita remutsigiri wekupera kwesvondo rino Sands China Macau GT Cup, iyo yakatambira vatyairi vemotokari dzemujaho kubva pasirese kuti vakwikwidze muchiitiko cheguta, Macau Grand Prix.
Sands China rutsigiro rwemujaho chikamu chekuenderera mberi kwekambani kutsigira kwemitambo uye kushanya kwemitambo muMacao, mukusimudzira chirongwa chehurumende yeMacao tourism +. Izvo zvakare mukutsigira kuzvipira kwehurumende mukubata 68th Macau Grand Prix kunyangwe paine matambudziko arikuenderera mberi nedenda, mukuyedza kupinza simba rakawanda munharaunda kuburikidza nechiitiko cheguta rose.
Vatungamiri veSands China Ltd. manejimendi nenhengo dzechikwata vakatungamirwa nemutungamiri wekambani Dr. Wilfred Wong kuti vaone mota dzakashongedzwa nelogo yeSands China panzvimbo yekutanga uye kuti vauye kumhemberero yekupa mibairo mushure memujaho neSvondo.
Vatyairi vanomiririra Macao, Hong Kong, nenyika huru vakakwikwidza muSands China Macau GT Cup, vachimhanya mumotokari dzepamusoro-soro kubva kuLamborghini, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Audi, neBMW.
Sands China inotarisira kuti mujaho uyu ungave nzira yekutsigira vanofarira zvemitambo munharaunda uye kukurudzira mikana yekuchinjana kubatsira kukwidziridza makwikwi epasi rose.
Sands China Ltd. ine nhoroondo yakareba yekutsigira kuvandudzwa kwezviitiko zvemitambo muMacao. Iyo kambani yakatsigira, yakabata, kana kuronga zviitiko zvemitambo zvakawanda mumakore apfuura, kusanganisira mubasketball, nhabvu, gorofu, tsiva, kumhanya uye zvimwe zvakawanda. Sands China inowanzoshandisa mikana inounzwa nemakwikwi aya nemitambo yezviratidziro kuita zviitiko zvekubatsira semakiriniki evechidiki nezviitiko zvinotarisana nenharaunda kuti vaenderere mberi nenharaunda uye kuwedzera zviitiko zvakanaka kuguta. Iyo kambani haina kuzununguka mukutsigira kwayo zviitiko zvemitambo muMacao, zvisinei nekunetseka kwakaunzwa nedenda.